यो साता निकै राम्रो छ यी ८ राशिको भाग्य, तपाईको राशि कुन ? - krishipost.com
यो साता निकै राम्रो छ यी ८ राशिको भाग्य, तपाईको राशि कुन ?
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवारिक साथसहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । ब्यपार ब्यवसायमा साजेदारी उत्तम रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । समय अनुरुप कार्यको निर्णय लिन नसक्दा सामान्य ढिलाईको सामना गर्नु पर्ला । नयाँ लगानि उत्तम रहनेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) अनावश्यक खर्चका कारण तात्कालीक आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्नेछ । कामकाजका क्षेत्रमा अरुको दवाबको महसुस हुने सम्भाबना रहेकोछ । देश बिदेशको यात्राको योग रहेकोछ । परीवारका सदस्यहरु सगँको सम्बन्धमाभने सामान्य झमेला उत्पन्न हुन सक्नेछ । हरकसैको बिश्वासमा नपर्नु होला ।